उपविधी र संविधान - अन्तर्राष्ट्रिय लेखन केन्द्र संघ
एसोसिएसनको Bylaws क्लिक गरेर उपलब्ध छन् अन्तर्राष्ट्रिय लेखन केन्द्र संघ bylaws.
संघ संविधान मा क्लिक गरेर उपलब्ध छ अन्तर्राष्ट्रिय लेखन केन्द्र संघ संविधान.
लेख I: नाम र उद्देश्य
सेक्शन १: संस्थाको नाम अन्तर्राष्ट्रिय लेखन केन्द्र संघ हुनेछ, जसलाई पछि आईडब्ल्यूसीए भनेर चिनिन्छ।
सेक्सन २: अंग्रेजी शिक्षकहरूको राष्ट्रिय परिषद (एनसीटीई) को एक असेंब्लीको रूपमा, IWCA ले निम्न तरिकामा छात्रवृत्ति र लेखन केन्द्रहरूको व्यावसायिक विकासलाई समर्थन र बढावा दिन्छ: १) कार्यक्रमहरू र सम्मेलनहरूको प्रायोजित; २) अगाडि छात्रवृत्ति र अनुसन्धान; )) लिखित केन्द्रहरूको लागि व्यावसायिक परिदृश्य बढाउनुहोस्।
अनुच्छेद २: सदस्यता
सेक्शन १: सदस्यता कुनै पनि व्यक्तिलाई बाँकी तिर्नेलाई खुला छ।
सेक्सन २: बाँकी संरचना ब्यवल्याजमा सेट गरिनेछ।
अनुच्छेद III: शासन: अधिकारीहरु
धारा १: अधिकारीहरू विगतका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति (जो छ वर्षको उत्तराधिकारीमा राष्ट्रपति र भूत राष्ट्रपति बन्छन्), कोषाध्यक्ष र सचिव हुनेछन्।
धारा २: अधिकारीहरू धारा I मा तोकिए बमोजिम निर्वाचित हुनेछन्।
धारा:: पदका सर्तहरू निर्वाचन पछि एनसीटीई वार्षिक अधिवेशनको लगत्तै सुरु हुने छ, पदले खाली पद भरेसम्म (अनुच्छेद see) हेर्नुहोस्।
सेक्शन:: उपराष्ट्रपति-राष्ट्रपति-विगतका राष्ट्रपति पद उत्तराधिकारीको पदका शर्तहरू प्रत्येक कार्यालयमा दुई बर्षको हुनेछन्, अपार-नवीकरणीय।
सेक्शन:: सचिव र कोषाध्यक्षको पद शर्तहरु दुई बर्षको हुनेछ, नवीकरणीय।
सेक्शन:: अफिसर्सले कार्यालय सर्तको बखत IWCA र NCTE सदस्यता कायम गर्नै पर्दछ।
सेक्शन:: सबै अफिसर्सको कर्तव्य ब्यवल्समा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
धारा 8: एक निर्वाचित अधिकारीलाई अन्य अधिकारीहरूको सर्वसम्मति सिफारिस र बोर्डको दुई तिहाई मत दिएमा पर्याप्त कारणका लागि पदबाट हटाउन सकिन्छ।
अनुच्छेद IV: प्रशासन: बोर्ड
सेक्शन १: बोर्डले क्षेत्रीय, ठूला र विशेष निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिहरू समावेशी सदस्यताको व्यापक प्रतिनिधित्वको बीमा गर्नेछ। क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू नियुक्त हुन्छन् (सेक्शन see हेर्नुहोस्); ठूला र विशेष निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिहरू बाइलाउजमा तोकिए बमोजिम चुनिएका हुन्छन्।
सेक्शन २: चयनित बोर्ड सदस्य शर्तहरू दुई बर्षको हुनेछ, नवीकरणीय। सर्तहरू स्थिर हुनेछन्; स्ट्यागर स्थापना गर्न, अवधि लम्बाइ अस्थायी रूपमा बाइलासमा रूपरेखा अनुसार समायोजित गर्न सकिन्छ।
सेक्शन:: क्षेत्रीय सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई उनीहरूको क्षेत्रीयबाट एक जना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न वा छनौट गर्न अधिकार छ।
धारा 4: राष्ट्रपतिले उप-संगठनका भोट नखाने बोर्डका सदस्यहरूलाई नियुक्ति गर्नेछन्।
सेक्शन:: बोर्ड सदस्यहरूले अफिसको अवधिमा IWCA सदस्यता कायम गर्नै पर्दछ।
सेक्शन:: सबै बोर्ड सदस्यहरूको कर्तव्य, निर्वाचित वा नियुक्त, बाइलासमा तोकिएको हुन्छ।
धारा 7: कुनै निर्वाचित वा नियुक्त बोर्ड सदस्यलाई अफिसनको सर्वसम्मति सिफारिस र बोर्डको दुई तिहाई मत दिएमा पर्याप्त कारणका लागि पदबाट हटाउन सकिन्छ।
अनुच्छेद V: प्रशासन: समिति र कार्य समूह
सेक्शन १: स्थायी समितिको नाम उपनिवेशमा राखिनेछ।
धारा २: उपसमिति, कार्यदल, र अन्य कार्य समूहहरू राष्ट्रपतिद्वारा गठित र पदाधिकारीहरूले चार्ज गर्नेछन्।
अनुच्छेद:: बैठक र घटनाहरू
सेक्सन १: कन्फरेन्स कमेटीको नेतृत्वमा IWCA ले नियमित रूपमा व्यावसायिक विकास कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्नेछ जसमा उपविभाजनमा उल्लेख गरिएको छ।
सेक्शन २: कार्यक्रम होस्टहरू बोर्ड द्वारा पुष्टि हुनेछन् र बाइलाउजमा उल्लिखित कार्यविधि अनुसार चयन गरिनेछ; होस्ट र IWCA बीचको सम्बन्धलाई विस्तृत रूपमा विस्तृत गरिनेछ।
सेक्शन:: सदस्यताको सामान्य बैठक IWCA सम्मेलनहरुमा हुनेछ। सम्भव भएसम्म, IWCA ले CCCC र NCTE मा खुला बैठकहरू पनि गर्नेछ। अन्य साधारण बैठकहरु बोर्डको विवेकमा आयोजित गर्न सकिन्छ।
सेक्शन:: बोर्डले संभव भएमा द्विमञ्च बैठक गर्नेछ तर प्रति वर्ष दुई पटक भन्दा कम; कम्तिमा कम्तिमा three अधिकारीहरु सहित बहुमत बोर्ड सदस्यहरुको परिभाषा हुनेछ।
धारा सातौं: मतदान
सेक्सन १: सबै व्यक्तिहरू अफिसर्स, निर्वाचित बोर्ड सदस्यहरू र संवैधानिक संशोधनका लागि मतदान गर्न योग्य छन्। संविधान वा उपविभाजनमा कतै उल्लेख गरिएको बाहेक कार्यवाहीका लागि सामान्य बहुमत प्राप्त कानुनी मतको आवश्यक पर्नेछ।
सेक्सन २: भोटिंग प्रक्रियाहरू बाइलाउजमा तोकिनेछ।
लेख आठौं: नामनिर्देशनहरू, चुनावहरू र रिक्त स्थानहरू
सेक्शन १: सचिवले मनोनयनका लागि आह्वान गर्नेछ; उम्मेद्वारहरूले आफैंलाई मनोनयन गर्न सक्दछन्, वा कुनै पनि सदस्यले मनोनयन गर्न राजी भएको अर्को सदस्यलाई मनोनयन गर्न सक्छ। मतदाताहरूले कुनै पनि पदका लागि कम्तिमा तीन उम्मेदवारहरू छनौट गर्न सक्ने बीमा गर्न प्रयास गरिनेछ।
सेक्सन २: योग्य हुन, उम्मेदवारहरू IWCA सदस्यहरू राम्रो स्थितिमा हुनुपर्दछ।
सेक्सन:: चुनावको समय तालिका उपविनिर्देशमा निर्दिष्ट गरिनेछ।
धारा:: यदि राष्ट्रपति पद म्याद अगावै खाली भयो भने विगतका राष्ट्रपतिले अर्को वार्षिक निर्वाचन नभएसम्म नयाँ उप राष्ट्रपति चुनेको समयसम्म भूमिका खेल्ने छन। अधिकारीहरूको वार्षिक परिवर्तनमा, बैठकले उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति पद ग्रहण गर्नेछन् र विगतका राष्ट्रपतिले या त विगतको अध्यक्षता पूरा गर्नेछन् वा कार्यालय खाली हुनेछ (धारा4हेर्नुहोस्)।
धारा:: यदि कुनै अन्य अधिकारी पद अवधि भन्दा पहिले खाली भयो भने, बाँकी अधिकारीहरूले अर्को वार्षिक चुनाव सम्म अस्थायी नियुक्तिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ।
धारा:: यदि क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद अवधि भन्दा पहिले खाली भयो भने सम्बद्ध क्षेत्रीय अध्यक्षलाई नयाँ प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न आग्रह गरिनेछ।
अनुच्छेद IX: सम्बद्ध क्षेत्रीय लेखन केन्द्र संघहरू
सेक्शन १: आईडब्ल्यूसीएले यसको सहयोगीहरूलाई क्षेत्रीय लेखन केन्द्रहरू संघ द्वारा बाइलाउजमा सूचीकृत मान्यता दिन्छ।
सेक्सन २: सम्बद्धहरू कुनै पनि समयमा सम्बद्ध स्थिति त्याग्न सक्दछ।
सेक्सन:: सम्बद्ध स्थितिका लागि आवेदन गर्ने नयाँ क्षेत्रहरू बोर्डको बहुमतले अनुमोदित हुन्छ; आवेदन प्रक्रिया र मापदण्ड Bylaws मा रेखांकित छन्।
सेक्शन:: सबै क्षेत्रीय सम्बद्धहरू आफ्नो क्षेत्रीयबाट एक प्रतिनिधि बोर्डमा नियुक्त गर्न वा छनौट गर्न योग्य छन्।
सेक्शन:: राम्रो स्थिति प्रदर्शन गर्ने आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूले IWCA लाई अनुदान वा क्षेत्रीय गतिविधिहरूको लागि समर्थनको लागि आवेदन हुन सक्छ जसलाई बाइलाउजमा उल्लेख गरिएको छ।
लेख X: प्रकाशनहरू
खण्ड 1: लेखन केन्द्र जर्नल IWCA को आधिकारिक प्रकाशन हो; सम्पादकीय टीम छनौट गरीएको छ र बोर्डसँग कार्य गर्दछ।
खण्ड 2: द लेखन ल्याब न्यूजलेटर IWCA को एक सम्बद्ध प्रकाशन हो; सम्पादकीय टोलीले बोर्डमार्फत बाइलाउजमा निर्धारित कार्यविधि अनुसार कार्य गर्दछ।
लेख XI: वित्त र वित्तीय सम्बन्ध
सेक्सन १: मुख्य राजस्व स्रोतहरूले सदस्यता शुल्क र आयडब्लुसीए प्रायोजित घटनाहरूका आयहरू बाइलाउजमा विस्तृत रूपमा समावेश गर्दछ।
धारा २: सबै पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको तर्फबाट ब्यालजमा तोकिएको शर्त अनुसार वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र खर्च फिर्ता लिन अधिकार छ।
सेक्शन:: सबै राजस्व र खर्चहरूको लेखा लिने र कोषाध्यक्ष द्वारा सबै IRS नियमहरु का अनुरूप नाफामुखी स्थिति को लागी रिपोर्ट गरीन्छ।
सेक्शन:: संगठन विघटन भएको खण्डमा अफिसरहरूले आईआरएस नियमहरू अनुपालनमा सम्पत्ति वितरणको निरीक्षण गर्न सक्नेछ (अनुच्छेद १२, भाग4हेर्नुहोस्)।
धारा XII: संविधान र bylaws
धारा १: आईडब्ल्यूसीएले संस्थाको सिद्धान्त र उपनियमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियाको रूपरेखाको रूपरेखा बनाउने संविधान बनाउने र त्यसलाई कायम राख्ने छ।
धारा २: संविधान वा उपविधीका संशोधनहरू १) बोर्डले प्रस्ताव गर्न सक्ने छ; २) IWCA सामान्य सभामा भाग लिने सदस्यहरूको दुई तिहाई भोट द्वारा; वा)) बीस सदस्यहरु द्वारा हस्ताक्षर र राष्ट्रपतिलाई पठाइएको याचिका द्वारा।
धारा 3: संविधानमा भएका परिवर्तनहरू दुई तिहाई बहुमतले सदस्यताद्वारा लिने कानुनी मतको आधारमा बनाइन्छ।
सेक्शन:: बोर्डलाई अपनाउने र परिवर्तनलाई बोर्डको दुई तिहाई बहुमतको आधारमा बनाइएको छ।
धारा 5: मतदान प्रक्रिया प्रक्रियाहरू धारा I मा तोकिन्छ।
अनुच्छेद XIII: IRS नियमहरु बाट छूट को स्थिति कायम राख्न
आईडब्ल्यूसीए र यसका सम्बद्ध संगठनहरूले आन्तरिक राजस्व कोडको सेक्शन 501०१ (सी) ()) मा वर्णन गरिएको संस्थाको रूपमा छुट पाउने आवश्यकताहरूको पालना गर्नेछन्:
सेक्शन १: यो संस्था आन्तरिक राजस्व संहिताको सेक्शन 1०१ (सी) ()) अन्तर्गत योग्य संगठनहरूलाई वितरण गर्ने संस्था सहित परोपकारी, धार्मिक, शैक्षिक वा वैज्ञानिक उद्देश्यका लागि मात्र संगठित छ। कुनै पनि भविष्यको संघीय कर कोडको सम्बन्धित सेक्सन।
सेक्शन २: संस्थाको कुल आम्दानीको कुनै अंश यस संस्थाका सदस्य, विश्वस्त, अधिकारी, वा अन्य निजी व्यक्तिको लाभ लिन वा वितरण गर्न सक्नेछैन, बाहेक संगठनहरू अधिकृत र सेवाहरूको लागि उचित क्षतिपूर्ति तिर्न सक्षम हुनेछन्। प्रस्तुत गरियो र यस संविधानको धारा १ मा र यस संविधानको धारा __2__ मा उल्लेखित उद्देश्यहरूको पूर्तिको लागि भुक्तान र वितरण गर्न।
धारा:: संस्थाको कुनै पनि गतिविधिका प्रचार प्रसार, वा अन्यथा कानुनलाई प्रभाव पार्ने प्रयास हुने छैन, र संगठन कुनै राजनीतिक अभियानमा भाग लिने वा हस्तक्षेप गर्ने छैन (बयानको प्रकाशन वा वितरण सहित) तर्फबाट वा सार्वजनिक कार्यालयको लागि कुनै उम्मेद्वारको विपक्षमा।
धारा:: यी धाराका अन्य कुनै प्रावधानको बाबजुद संगठनले आन्तरिक राजस्वको धारा 4०१ (सी) ()) अन्तर्गत संघीय आयकरबाट छुट पाउने संस्थाले अनुमति नदिएको कुनै पनि अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने छैन। कोड, वा कुनै भविष्य भावी संघीय कर कोडको सम्बन्धित सेक्सन, वा (बी) संगठन द्वारा, योगदान जुन आन्तरिक राजस्व कोड को धारा १ (० (c) (२) अन्तर्गत कटौती योग्य छ, वा कुनै पनि भविष्य संघीय करको सम्बन्धित सेक्सन कोड
धारा:: संगठनको विघटन पछि, सम्पत्ति आन्तरिक राजस्व कोडको सेक्शन 5०१ (c) ()) को अर्थ वा कुनै पनि भविष्यको संघीय कर कोडको सम्बन्धित सेक्सनको अर्थ एक वा बढी छुटको उद्देश्यका लागि वितरण गरिनेछ, वा संघीय सरकार वा राज्य वा स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक उद्देश्यका लागि वितरण गरिनेछ। त्यस्ता सम्पत्तिको यथोचित निकास नगरेको कुनै पनि सम्पत्ति काउन्टीको सक्षम क्षेत्राधिकार अदालतले यस संस्थाको प्रमुख कार्यालय स्थित भएको खण्डमा सोही प्रयोजनका लागि वा त्यस्तै संस्था वा संगठनहरूलाई सोधेको छ, जसरी अदालतले निर्धारण गरे अनुसार संगठित छन् र त्यस्ता उद्देश्यका लागि विशेष रूपमा संचालित।